Huawei MateView: Kormeere heer sare ah oo hagaajiya wax soo saarkaaga | Wararka Gadget
Miguel Hernández | | General, Sawir iyo dhawaq, Reviews, Telefishinada
Huawei waxay sii wadaa inay ballaariso badeecadaha kala duwan ee macaamiisha iyadoo leh noocyo kala duwan, dhowaan waxaan kuu sheegnay sida aad si weyn ugu wanaajin karto Waxqabadka shabakadda WiFi ee gurigaaga oo leh router -kaaga, oo aad si fiican ula socotid bilaabitaankoodii ugu dambeeyay marka la eego saacadaha caqliga badan. Maanta waxaan diiradda saareynaa waxa illaa iyo hadda u muuqday dhul aan la ogeyn shirkadda Aasiya.
Waxaan si qoto dheer u falanqeynaa Huawei MateView, kormeere sababta oo ah qaabkiisa, naqshadeyntiisa iyo astaamihiisa ayaa kuu oggolaanaya inaad ku horumariso wax soo saarkaaga sida ugu badan "qaddar". Nala soo hel dhammaan astaamaha Huawei MateView iyo sababta ay u noqotay mid ka mid ah kormeerayaasha ugu carqaladeeya suuqa.
1 Agabka iyo naqshadeynta: Jidka Huawei waa midka saxda ah
3 Isku -xidhka iyo wax -soo -saarku way isla socdeen
4 Isticmaal khibrad si aad ula jaanqaado duruufo badan
Agabka iyo naqshadeynta: Jidka Huawei waa midka saxda ah
Kormeeraha ayaa wax badan ka sheegaya "sameynta", in Huawei ay ogtahay oo ay dooneysay inay diiradda saarto dhammaan indhaha. Kormeerahaani wuxuu leeyahay naqshad aad u yar iyo agab "qaali ah" si uu ugu kaco munaasabadda. Si aad u noqoto qof daacad ah, waxaad inta badan maalintaada ku fiirin doontaa aaladdan, maxaad u naqshadayn weyday mid aad u qurux badan? Waxaan si xishood la'aan ah u dhihi lahaa waxaan wajahaynaa naqshad warshadeed taas fool-ka-fool u eeg iMac-ka Apple, wax yar oo sumado ah ayaa dib u soo celin kara. Waxaad ku iibsan kartaa qiimo cajiib ah si toos ah Amazon.
Cabirrada: 28,2 inches
Saldhig: Hagaajinta dhererka 110 milimitir iyo u janjeera u dhexeeya -5º iyo + 18º
Color: Aluminium la jajabiyey
Waxay leedahay cudud si fiican loo dhisay oo ku dhegsan kormeeraha iyada oo la adeegsanayo wareegga wareegga iyo taageerada wareega ee dhererka, mar walba jihada toosan, haa. Tiirkan waxaad ka heli doontaa nidaamka dhawaaqa stereo oo aan ka hadli doonno goor dambe, iyo sidoo kale iskuxirka iyo dekadaha lacag -bixinta, run u ah minimalism, isdhexgalka iyo xarrago. Ma awoodno inaan helno macluumaad ku saabsan culeyska badeecadda, laakiin tijaabooyinkeenna waxaan ku ogaanay inay tahay aalad wanaagsan oo adeegsata agabyada '' premium '', ay aad u miisaan badan tahay. Isticmaalka shaashadda waa 94%, taas oo caddaynaysa shaqada laga qabtay arrintan.
Waxaan hor joognaa guddi LCD - IPS oo leh saamiga dhinac 3: 2, sida qaar ka mid ah kombiyuutarada Huawei iyo kiniiniyada. Saamiga dhinacan ayaa la caayay waqti ka dib si loo soo bandhigo shaashadaha ballaaran, laakiin waxay macno badan u sameyneysaa heerka wax soo saarka mar labaad, waxaan xoogga saari doonnaa goor dambe.
Waxaan ku haysannaa 28,2 inji 4K + qaraar (3.840 x 2.560) kaas oo isku daraya farsamada HDR400, waayo tan wuxuu u adeegsadaa a 500 talooyin iftiin, ka sarreeya heerka suuqa ee guddigan oo kale. Waxaan haynaa qiimeyn cabbir ah "kaliya" 60 Hz taas oo ina xusuusineysa inaan wajahayno kormeere diirada saaraya wax soo saarka, iyo saamiga 1.200: 1 isbarbardhig.
Waxaan leenahay 98% DCI-P3 ee gamut midabka iyo 100% sRGB, ku habboon sawir iyo tafatirka fiidiyaha, oo bixineysa ku dhawaad ​​1.070 bilyan oo midabbo leh si hufan oo aad u sarreeya? E <2. Gudidani waxay muujiyeen xaglo daawasho oo aad u wanaagsan imtixaankeenna oo ay weheliso iftiin si dhakhso leh noo xusuusinaya in kani yahay badeecad ka sarreysa celcelis ahaan, oo ku faraxsan VESA-ga la xaqiijiyay HDR400, oo haddana ah darajo hoose. Ee heerarka HDR10.
Isku -xidhka iyo wax -soo -saarku way isla socdeen
Dhinaca midig waxaan ka heli doonnaa «HUB» weyn oo na siin doona laba dekedood oo USB-A ah casri ah, deked DisplayPort USB-C oo la jaan qaadaya ku-dallacsiinta illaa 65W iyo a jaakada maqalka ee hybrid (oggolaanshaha gelinta iyo soo -saarka) ee 3,5mm. Si kastaba ha noqotee, wax walba halkan kuma hadhin, dhabarka ayaa loogu talagalay dekedda korontada ee USB-C oo awood siisa aaladda ilaa 135W, oo ay weheliso qadiimiga Mini DisplayPort iyo deked HDMI 2.0 ah.
Laba makarafoon oo la dhisay ayaa soo qaadaya maqalka stereo ilaa 4 mitir u jira, waxtar u leh isdhexgalka kaaliyayaasha dalwaddu, tafatirka fiidiyaha, iyo wicitaannada shirka.
Ku iibso qiimaha ugu fiican> BUY
Sidan ayaan uga faa'iidaysan karnaa inaan u isticmaalno hal deked USB-C sidii dheereyn kombiyuutarkeena, isla mar ahaantaasna ay ku dallacdo oo ay ku dhex gasho HUBkeeda. Ma aha wax walba halkaan, maaddaama Huawei uu doonayo inuu xiro khibradda MateView isaga oo ka dhigaya mid la jaan qaada teknolojiyaddeeda badan ee laga hirgaliyay aaladda sumadda:
Dib -u -ciyaarista Wireless -ka iyo Saadaasha
Xiriirka Wireless -ka iyo fidinta desktop -ka adiga oo ku soo dhoweynaya taleefankaaga saldhigga
Sidaa darteed, nooca leh isku xirka wireless wuxuu adeegsadaa kaarka shabakadda WiFi iyo Bluetooth 5.1, si kastaba ha ahaatee, saadaasha la marinayo fiilada USB-C ayaa ku firfircoon dhammaan noocyada.
Isticmaal khibrad si aad ula jaanqaado duruufo badan
Waxaan ku bilaabeynaa "warbaahin badan", in kasta oo ay maalmahan noqon doonto wax naadir ah in lagu muujiyo shaashad dhinac leh, waxaa lagu xalliyaa guutooyinkeeda madow ee sare iyo hoose. Dhiniciisa, haysashada HDR400 iyo dhalaalka caadiga ah ee nits 500 ayaa nagu martiqaadaya inaan daawano taxanaha, YouTube, Twitch ama bixiyaha aan jecel nahay. Si loo soo koobo waayo -aragnimada Huawei waxay ku dhejisay salka MateView laba 5W oo ku hadla oo bixiya dhawaaq rikoodh oo leh godad bass kor u qaadaya iyo qiyaasaha DSP madaxbannaan, natiijada: Mid ka mid ah khibradaha ugu wanaagsan ee aan ka helnay heerka dhawaaqa kormeeraha astaamahan.
Si aan ula falgalno kormeeraha iyo istcimaalka isticmaale ee dareen leh waxaan leenahay bar taabasho ah oo ku taal garka hoose ee ay Huawei ugu magac dartay SmartBar, Midkani wuxuu leeyahay qalooca waxbarasho ee xiisaha leh, laakiin markaad la qabsato, waa faahfaahin ku habboon aaladda:
Hal taabo> Xaqiiji
Laba qasabadood> Dib
Mugga xakamaynta> Hal far ku mari
Beddel soo gelinta> Ku jiid laba farood
Haddii kale, Waxaan ka helay midabaynta kala -soocidda mid cajiib ah, waxay kuu oggolaaneysaa inaad tafatirto fiidiyaha iyo sawirrada leh natiijooyin wanaagsan, marka lagu daro, Qaybinta 3: 2 waxay wanaajisaa waxsoosaarka sababtuna tahay naqshadaynta daaqadaha iyo macluumaadka lagu soo bandhigay dhexdooda. Si aad uga shaqayso hal kormeere, guddi panoramic ah (haddii aysan ahayn UltraWide) waxay wax u dhimaysaa naqshadaynta daaqadaha mana aha sida saxda ah ikhtiyaarka ugu fiican marka la shaqeynayo. Soo noqoshada wajiga 3: 2 ayaa dhoolla -tus u keentay kuwa naga mid ah ee adeegsada kormeerayaashaan si joogto ah u shaqeeya.
Kormeerahaan Huawei wuxuu isku daraa naqshadeynta, tayada iyo walxaha kala duwan ee isku xirnaanta kuwaas oo qiimo dheeri ah leh markaad saacado dheer ku qaadato miiskaaga. Awood -darrada keenista 3: 2 iyadoon wax weji -gabax ah iyo sharad ku samaynaynin naqshadeynta ugu yar ayaa kormeerahan ka dhigaysa mid ka mid ah xulashooyinka ugu horreeya ee badhtamaha / kala -sarraynta ee suuqa. Sida iska cad, waxay si toos ah uga durugsan tahay waaxda "gaimng" halkaas oo Huawei horeyba u siisay beddel u gaar ah MateView GT, in kasta oo ay taasi jirto, waxay leedahay waxqabad aad u wanaagsan xagga isticmaalka waxyaabaha maqalka ah. Qiimaheeda wuxuu u dhexeeyaa € 599 ee nooca caadiga ah iyo € 649 ee nooca leh saadaasha wireless, adigoo isticmaalaya kormeerayaal kale oo isku eg warqadda, laakiin ha ka dhex muuqan isku horyaal markaad ku aragto desktop -kaaga.
Guddi si fiican u habboon, oo leh muuqaal wanaagsan oo wax soo saar leh
Khibrad warbaahin oo aad u wanaagsan
Isku xirnaanta sare iyo isdhexgalka
Macluumaadka ku saabsan miisaanka iyo cabbirka ayaa maqan
SmartBar -ku wuxuu u baahan yahay waxbarasho
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » Huawei Mate View, waa koox guulo oo horumarisa wax soo saarkaaga [Falanqaynta]